Resaky ny mpitsimpona akotry : fiandrasana kitapo ho latsaka | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fiandrasana kitapo ho latsaka
Nirava maina ny fihaonan’ireo antoko tsy mpanohana ny Filoha, samy tsy tia hisalotra ilay sata atokana ho an’ireo mijoro ho mpanohitra. Ny tsirairay amin’ireo antoko ireo dia mandroso avokoa antony ho fandavana izany. Ho an’ny mpanara-maso sasantsasany dia samy matahotra ny ho voahendrikendrika ho mpandranitra ny fanozongozonana raha toa mitranga ny hetsika mifono tetika fanonganana. Eo indray dia miseho ilay resaka tsy hita idifina raha vao adihevitra mikasika raharaha pôlitika no hiarahana midinika. Tsy ny tsangan-kevitra no hoe tsy mitovy fa ny olona tohanana no samy manana ny azy ary izay no mitarika fifandrafesana. Inona no azo antenaina amina fampihavanana raha mbola fiadiana toerana fotsiny no mahatonga an-dry zalahy ho mpirafy fa tsy eo ny fifaninanana hampamirapiratra ny hevitra entina hampadrosoana ny tanindrazana.
Ny fijorona ho mpanohitra moa ve dia tsy maintsy voahosotra ho mifono tetika fanonganana. Na ry zareo eo amin’ny toeram- pitondrana na ny mpanohitra dia samy vontom-pinoana amin’izany. Raha vao misy fivorivoriana mangingina dia injay ny fiampangana ny fisiana fikotrehina fanonganam-panjakana, ny mpanohitra koa dia tsy miafina amin’ny faniriany hitrangan’izany ary miseho ho mpaminany mihitsy aza tsy mitsahatra amina fanambarana fa tsy ilaina akory ny fanozongozonana fa tsy ela dia hirodana ho azy ny fitondrana. Vava tsy latsaka fotsiny ny azy fa toy ny manome fampanantenana mihitsy izy ireo amin’ny fahavononany hitsimpona ny latsaka sy handroaka ny raraka.
Aoka ry zalahy ê ! Samy miandrandra na midedehaka ho Olobe natao ho Mpitondra fanjakana, “homme d’Etat”, avokoa ny andaniny sy ny ankilany rehetra izao, nefa samy mino fa voaozona hivarilavo amin’izany ny firenena. Samy tsy mino fa ny fifandimbiasana dia ara-potoana. Izay tafakatra eo amin’ny fitondrana moa dia tsy manana eritreritra afa-tsy ny hanamafy ny toerana sy ny ahafahana mamikitra eo mandritra izay ela indrindra, ny mpifaninana dia sady velom-pia… tsindrindaony tsy mahandry tantana, mivavaka mba hitrangan’ny savorovoro hanafainganana ny fifandimbiasana. Tsy misy raharaha vanona : tano ny azo fa sarotra no mila hoy ny eo an-toerana, ozongozony hidaboka haingana hoy kosa ny mpifaninana. Mbola izany ihany izao no tazana, ny fandinihina ny fahasahiranan’ny mponina tsy hita firy izay vokany, ny ezaka dia efa natao ho fanomanana ny fifaninanana amin’ny 2018, eo koa ireo mpaniry loza manantena fa tsy aharitra amin’izany dia iseho ny ady saritaka.